Victoria Beckham fomba - sary tsara tarehy sy fofom-bady, makiazy sy volo
Lamaody Star style
Ny Victoria Victoria Beckham - tsiambaratelo ny saripika lamaody
Nikiakiaka loko, akanjo lava fohy, akanjo lava, kiraro maingoka sy lakolosy - tao anaty akanjo toy izany ny iray tamin'ireo mpihira avy amin'ny vondrona malaza pop Spice Girls niseho teo anoloan'ny loko fakantsary. Hatramin'izao, ity tsirony ratsy ity dia tsy misy làlan-kizorana intsony, ary ny Victoria Beckham dia manentana ny lamaody manerantany mba hamoronana sary mifanaraka amin'izany.
Victoria Beckham - lamaody lamaody
Ny "Starry" dipoavatra, ny fanambadiana an'i David Beckham, iray amin'ireo mpilalao tena nahomby indrindra, dia matetika no teo ambany fijerin'ny mpitsikera lamaody noho ny fitiavana tsy misy fitiavan-tena amin'ny akanjo mivaivay. Ny fanamelohana sy fanaratsiana avy hatrany dia nanosika ilay tovovavy hanatsara ny endriny. Tsy nety nanao akanjo marevaka sy akanjo marevaka izy, izay mampahatsiahy ny kilao. Ankehitriny, ilay mpihira roa amby roapolo taona, izay nanorina ny orinasany manokana amin'ny indostrian'ny lamaody, ny maro dia ny endriky ny halehibiazina sy ny fiterahana, sary mahafinaritra ao amin'ny fomba fanehoana klasika .
Ny fomba fijerin'i Victoria Beckham amin'ny fiainana andavanandro
Ny maha-olona ho an'ny besinimaro, ny endriky ny andavanandrom-piainan'i Victoria Beckham dia tsy mifandray amin'ny legotra tsotra, paompy sy kiraro. Na ahoana na ahoana fomba ivelan'ny trano ho azy dia fotoana iray hanehoana fankafizana tsara. Ny fanehoana kiraro mivantana na lavaka miaraka amin'ny lobaka mareva-doko na akanjo marevaka, dia mameno ny sariny amin'ny kiraro marevaka amin'ny kofehy matevina ambony, izay karatra fandraharahana. Na dia mandeha amin'ny ankizy aza ny kintana dia mahagaga, mifidy akanjo fohy amin'ny endrika A na modely amin'ny endriky ny saribakoly zazakely, vita amin'ny laconic.
Victoria Beckham - endrika fanatanjahan-tena
Ny fahitana an'i Victoria amin'ny fanatanjahan-tena dia azo atao ao amin'ny toeram-pisakafoanana, izay fitsidihany isan'andro, na amin'ny hazakazaka. Ny fitomboan'ny fitiavana sy ny fitiavana ny kilasy dia tsy mamela azy hitafy kiraro, t-shirts, leggings. Ny singa sasantsasany amin'ny fanatanjahantena dia ahitana ny fomba an-dalam-be an'ny Victoria Beckham, saingy amin'ity tranga ity dia feno sary mahazendana ny sary. Raha ny ambony, avy eo matanjaka, raha ny tennis, dia mamiratra! Ao an-dakozia dia misy mason-koditra, baolina fanatanjahatena ara-panatanjahan-tena ary pataloha maintim-bazana. Ny farany, tamin'ny lafiny, dia voatsikera noho ny paparazzi ubiquitous, izay naka ny kintana tamin'ny fivoahana avy tao amin'ny fivarotana lehibe.
Victoria Beckham - sary hariva hariva
Beckham dia tia akanjo-akanjo, pataloha misy lantom-pivelomana, pataloha mahitsy ary matevina. Ny loko tena tiany indrindra dia ahitana felana beige, ny akanjo ho an'ny fotoana manokana dia natao fotsy na mainty. Ny sary hariva avy any Victoria Beckham dia samy hafa ny fifehezana. Mifidy akanjo manintona ny nono izy, ary koa modely eo ambany lohalika miaraka amin'ny tendrony mihidy. Ny fehin-kibon'ireo karazam-barotra dia mihalevina amin'ny endriny amin'ny endriky ny vato, drafitra na fitaka. Ny akanjo misy akanjo manify dia ampahany manan-danja amin'ny tsipìkan'i Victoria.
Ny akanjon'i Victor Victoria dia Beckham
Maro amin'ireo olo-malaza no mitondra ny akanjon'ny Victoria Beckham, ny sandany dia miovaova ao anatin'ny $ 2000, fa tiany kosa ny akanjo noforonin'ireo mpanakanto Chloé, Céline ary Balenciaga. Ny ankamaroan'ny akanjo rehetra dia mampifangaro volo mendri-kaja miaraka amin'ny loko marevaka, silhouette matevina, lava iray eo ambanin'ny lohalika sy ny minimalista. Mandeha amin'ny loko malaza, ny kintana dia manala ny tsy fahampian-dry zareo miaraka amin'ny akanjo tsy mahazatra, manandrana manapaka ny halavany, andamosiny. Ao amin'ireo akanjo tsy maotina dia afaka mahita akanjo fohy amin'ny fomba amin'ny fito-polo sy ny modely mivantana amin'ny basques.
Ny sary tsara indrindra an'i Victoria Beckham
Tanisao ny hatsarao tsara indrindra Victoria Beckham, satria betsaka izy ireo. Tamin'ny fararano dia nahafaly ilay sary tamin'ny endriky ny fotsy tanteraka izy, nanao akanjo lava lava mitaingina asymmetrika ary misy sweater izay manaloka ny lamba fantsom-paty. Zana-tsokosoko misy kiraro misy printy sy solonanarana leopara. Indray mandeha indray dia nampiasa an'i Victoria ny endritsoratra momba ny biby, izay nanamboatra ny kitapo, tamin'ny sary manopy somary boribory vita amin'ny garazy sy ny pataloha beige. Manintona ny saina amin'ny fanandramana maotina amin'ny voangory sy voninkazo manga, ny ankafizo Beckham amin'ny vanim-potoana vaovao.
Na dia tamin'ny fararamanitra aza dia nahatratra ny volom-bavany ny volon'i Victoria, ary nanapa-kevitra ny hiova izy tamin'ny volana Desambra. Amin'izao fotoana izao dia mitazona toerana malalaka iray izy, ary manome ny volony amin'ny endriny tsy misy dikany. Taloha, ny "peppercorn" dia nanandrana ny loko volom-boasary, niala teo amin'ny brunette iray nirehitra tao anaty blondingo mamitaka, ary avy eo dia mena. Inona no karazana volo azon'i Victoria?
Volo malemy . Afaka ny ho mendri-pitokisana tanteraka izy ireo, misaraka amin'ny fizarazarana afovoany na aty aoriana, ary somary mihodinkodina amin'ny mpangalatra lehibe. Ny fahatsapana tsotra ny fandrakofana toy izany dia natsangan'ny jiro jiro tamin'ny fotoana iray isan-taona.
Ny pony tail . Mba hahitana tsara kokoa ny volom-borona, ny olo-malaza dia mamela tady maromaro maromaro, ary manangana volavolan-damba fanampiny any ambadiky ny lohany. Fanovana hariva - rambony miaraka amin'ny volo mangatsiatsiaka.
A bunch . Ity haingon-tena volo Victoria ity dia mampiasa isan'andro. Ny banga tsy misy karama dia mameno tsara ny sary amin'ny akanjo lava fohy.
Ireo mpankafy koa dia mahatsiaro ireo horita volombava fohy avy amin'i Victoria Beckham, izay, tamin'ny endriny, dia namorona fironana vaovao eo amin'ny tontolo amin'ny hairdressing. Vao haingana, tian'ny alokaloka kanto izy io, izay toa voajanahary ary manasongadina ny loko misy an'i Victoria.
Victoria Beckham - bob an-doha
Ny fiakaran'ny vehivavy lamaody mihoatra ny folo taona lasa izay, ny fahasamihafàn'i Victoria dia tsy nitovy tamin'ny dikan-teny malaza tamin'ny fisian'ny lavaka lava amin'ny lafiny tsirairay. Avy hatrany dia nantsoina hoe pop-bean izy (tao amin'ny vondrona pop antsoina hoe Posh Spice). Araka ny voalazan'i Victoria Beckham, ny volony dia namela azy hanalefaka ny tadiny, ary noho ny volony volo sy ny fizarana doka dia nitombo kokoa ny volony. Ny "Peppercorn" dia nanandrana nanao styling, nanamboatra ny volony tamim-pitandremana sy nanao onjam-pahazavana. Nandritra ny taona maromaro dia tsy nanova ny sariny izy , fa ny vehivavy lamaody kosa nanohy nanontany ireo mpanolo-tena mba hanamboatra azy ireo ho toy ny mpihira.
Victoria Beckham - volo volo
Hatramin'ny taona 2002, Victoria Beckham, sary famantarana ho an'ireo mpitsikilo an'ny Spice Girls, dia nitarika kôdza niaraka tamin'ny fizarana sasantsasany na aty aoriana. Avy eo dia nanomboka ny fanandramana tamin'ny loko, ary tsy niova ny lokony. Tamin'ny taona 2002, nanamboatra voanio izy, izay antsoin'izy ireo - volo amin'ny fomba ofisialy Victoria Beckham, na pos-bob. Fomba fanolokoloana avy amin'ny kintana:
satroboninahitra volomparasy miaraka amin'ny kofehy lava mitongilana;
ny vokatry ny fahamendrehana amin'ny kofehy maningana;
mofomamy mihodina volon-doha amin'ny ampahany lehibe;
nanangona volo teo amin'ny lamosin'ny lohan-doha tamin'ny varavarankely malalaka teo amin'ny tempoly.
Fito taona ilay mpihira dia nanao zava-maitso tsara tarehy, izay nanjary lamaody lamaody, ary tamin'ny taona 2009 dia nanakenda ny halavan'ny volony izy. Avy eo dia niely fa tsikaritr'i Victoria Beckham miaraka amin'ny fihoaram-pefy fohy sy fialam-boly mitovitovy amin'ny fomba fitafiana efa tranainy no manandrana ny ho tahaka ny Audrey Hepburn malaza. Etsy ankilany, mbola misy lanjany ny sarin'ny lamaody nataon'i Victoria Beckham nandritra ny taona lasa.
Izay rehetra niafina tamintsika: tsipiriany momba ny fampakaram-bady
Eva Longoria dia nahazo kintana iray tao amin'ny Walk of Fame: tonga dia niarahaba azy ny vadiny sy ireo namany
Ny olana lehibe indrindra amin'ny fanamboarana mahomby dia akanjo hoditra marefo amin'ny piora lehibe. Tahaka an'i Victoria Beckham tsy misy sary dia tsy misy dikany, fa miasa ao amin'ny ekipan'ny mpanakanto maingoka maingoka, mametaveta masiaka malemy, mifantoka amin'ny masony tsara tarehy. Fanamboarana sora-baventy nataon'i Victor ny mason-tsivana , vita amin'ny loko mainty na fotsy, manjelanjelatra ny masony, voatsindry amin'ny takolaka terakotta sy ny lipstick nude. Indraindray, rehefa mamorona sary amin'ny hariva izy dia mipetraka amin'ny lantovaly mena na mainty kiraro.
Ny endriky ny Monica Bellucci
Ny biography of Miroslava Karpovich
Shakira amin'ny kiraro
Hairstyle of Ani Lorak 2014
Ahoana no fiakanjahan'i Xenia Borodina?
Ny estrus ny alika - ny fitsipiky ny fikarakarana
Mitafy tanana amin'ny tanana manokana
Takela-by ho an'ny fanokanana trano ivelany
Make up by Sophia Loren
Biby - mitombo ao an-trano
Tadiavo - resipe
Harena an-kakazo ao anaty sauce sy mamy
Casserole avy amin'ny tsaramaso sy ny pokontany
Ny vadin'i Chuck Norris dia nanambara ny famonoana gadolinium
Classic trano fatoriana - fahamendrehana, fahamendrehana ary fampiononana
Scott Disik dia nankalaza tamim-pifaliana ny andro nahaterahany teo amin'ny sandrin'i Sofia Ritchie 18 taona
20 alika izay nitombo bebe kokoa noho ny nandrasany ...
Sakafo ho an'ny salady salady malaza miaraka amin'ny ovy